Sarudzo nyowani mune MacOS Sierra Finder zvaunofarira | Ndinobva mac
Sarudzo nyowani muMacOS Sierra Tsvaga
Makore apfuura, vagadziri vakatora mukana wekushayikwa kwesarudzo dzekuburitsa "vitaminized" Tsvaga iyo yaizosangana nezvinotarisirwa nevashandisi vefaira zvakanyanya. Ichokwadi kuti iyo Apple system ine chakavanzika chombo, kuiswa kwe Automator kuzadza zvakawanda zvezvikanganiso zve Finder. Asi chero zvakadaro, kunyanya kune vashandisi vasina hunyanzvi kana vanongoda zvekutanga sarudzo, Apple inosarudza kuwedzera mabasa matsva kuKutsvaga muMacOS Sierra . Aya ndiwo matsva ayo maviri.
Bvisa zvinhu kubva mumarara mushure memazuva makumi matatu: Kusvikira Mac OS Sierra isina chikonzero chekubvisa zvinhu kubva mumarara nguva dzose uye isu tinogara tiri muchinzvimbo chekuti ndibvise ruzivo nekukasira kuti risaunganidze kana kurisiya kwechinguva kwechinguva kana richifanira kushandiswa zvakare. Zvakanaka basa iri gadzira faira kubviswa pavanosara anopfuura mazuva makumi matatu. Isu tinoona basa iri mune mamwe mapurogiramu, sekubviswa kweMifananidzo mune yechinyakare Mac uye IOS application.
Chengeta maforodha pamusoro kana uchirongedza nemazita: Kana tichida kutsvaga faira, kunze kwekunge tanyatsoziva zvatinoda kutsvaga, chinhu chakajairika kutanga nechimwe chinhu chakajairika, kuramba tichitsvaga mukati mavo nekuwana ruzivo runodiwa. Semuenzaniso, ini ndoda kutsvaga invoice yechiitiko. Isu tinowanzo tsvaga neyekudimbudzira keyboard Alt + Cmd + nzvimbo uye kutsvaga nezviitiko zita Kusvika parizvino, iwo ruzivo rwunoratidzwa nekuchengetedza mafaira uye mafaera. Tichitarisa iyi sarudzo nyowani, tichaona maforodha ari pamusoro (ndokuti, kutanga) uyezve ruzivo rwasara.
Pakutanga mabasa aya anenge akavanzwa. Kuti tivashandise, tinofanirwa kuwana Tsvaga dzeKutsvaga uye tinya pamberi, kwatinogona kumisikidza ivo.
Aya mashoma-akavanzika mabasa anoenderera mberi kuwedzera kune iyo runyorwa rwe zana kana mazana maviri sarudzo nyowani dzinoziviswa kwatiri nekuburitswa kwega yega sisitimu yekushandisa, tichaona kuti mangani acho achiri kuwanikwa muMacOS Sierra.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Sarudzo nyowani muMacOS Sierra Tsvaga
Fran Molina akadaro
Kuwedzeredzwa kwese kunogona kuvanzwa kamwechete, kana isu tichaenderera mberi muna 1985?
Pindura Fran Molina
Inguva yekuvandudza yako iPad? Ndedzipi sarudzo dziripo?